निर्मला पन्तको हत्यारालाई पुस २ गतेसम्म पक्राउ नगरे डा.गोबिन्द केसीले आन्दोलन सुरु गर्ने – Rajmarg Online
निर्मला पन्तको हत्यारालाई पुस २ गतेसम्म पक्राउ नगरे डा.गोबिन्द केसीले आन्दोलन सुरु गर्ने
सोमबार, मंसिर १०, २०७५
काठमाडौं- पुस २ गतेदेखि अनसन बस्‍ने घोषणा गरेका डा. गोविन्द केसीले कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको हत्‍यारालाई कारबाहीको माग गरेका छन्।
सोमबार टिचिङ अस्पतालमा पत्रकाल सम्‍मेलन गर्दै उनले मुलकमा कुशासन गर्ने र जनताको हक हनन् गर्नेविरुद्ध आवाज उठाउनु आफ्‍नो नैसर्गिक अधिकार भउको बताए। उनले भने, ‘मुलुकमा कुशासन गर्छन् भने म चुप लाग्न सक्दिन। जनताको हक हनन् गर्छन् भने मैले आवाज उठाउनु मेरो नैसर्गिक अधिकार हो। १३ वर्षीया बालिकाको बलात्कार र हत्या गरिएको छ। अपराधीलाई लुकाउन सरकार मौन बस्छ भने त्यो देशमा म बोल्नुपर्छ।’
उनले गृहमन्त्रालय र प्रहरी प्रशासन मात्र होइन सिंगो राज्‍य नै निर्मलाको हत्यारा लुकाउन लागि परेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘अहिले प्रहरी र गृह मन्त्रालयलगायत सिंगो राज्य संरचना अपराध नियन्त्रण गर्नुको सट्टा अपराधीलाई संरक्षण गर्न, अपराधका प्रमाणहरु नष्ट गर्न र फर्जी अपराधी उत्पादन गर्नमा लिप्त भएको भान परेको छ।’
राजनीतिक नेतृत्वले आफ्‍नो नामबाट दलाल, माफिया, बिचौलिया र अपराधीहरुलाई देश चलाउन छाडिदिउको उनको आरोप छ। उनले देशमा निर्मलाजस्ता कैयौ बालबालिका, किशोरी तथा महिलाहरु दिनानुदिन बलात्कारको सिकार हुनु र राज्‍यबाट न्‍यायको सट्टामा अपमान र यातना पाउनु दण्डहीनताको पराकाष्टा भएको बताए।
निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्‍यामा संलग्‍न व्‍यक्तिहरुलाई तत्काल पक्रउा गरी मुद्दा चलाउनु पर्ने, प्रमाण लोप गर्नु, झुठा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्‍याय माग्‍न गएका व्‍यक्तिमाथि गोली हानी हत्‍या गर्नेमाथि फौजदारी मुद्दा चलाउनु पर्ने माग उनले राखेका छन्।
३ बुँदे माग राख्दै डा. गोबिन्द केसीले सरकारलाई पुस २ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन् । यदि पुस २ गतेसम्म आफ्ना माग पूरा नभए १६ औ सत्याग्रहको आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सोमवार विज्ञप्ती जारी गर्दै डा. केसीले राज्य संयन्त्र भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको भन्दै मेडिकल शिक्षा सुधारको माग पुन दोहो¥याएका छन् । गएको ११ साउनमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न ब्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गरि मुद्दा चलाउन डा. केसीले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
प्रमाण नष्ट गर्ने, झुठा प्रमाण बनाउने, यातना दिने र न्याय माग्न गएका ब्यक्ति माथी गोली चलाई हत्या गर्नेलाई तत्काल फौजदार मुद्दा चलाउन उनले आग्रह गरेका छन् ।
दाङमा जनता आवास कार्यक्रम, २६७ घर निर्माण हुने
भारतको हैदरावादमा लुटपाट गरेको आरोपमा पाँच नेपाली पक्राउ
बर्दियामा बाघको आक्रमणबाट २ युवकको मृत्यु